ထိုးကွင်းထိုး - သင့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကဒီဇိုင်းကောက်နေ - သတင်း Rule
ထိုးကွင်းထိုး – သင့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကဒီဇိုင်းကောက်နေ
တက်တူးထိုးဤသည်နေ့ရက်ကာလသည်အလွန်ဘုံရှိပါတယ်, နီးပါးနှင့်အတူ 1 တွင်4အနည်းဆုံးရှိခြင်းကလူ. တက်တူးထိုးထားတဲ့အနုပညာပုံစံကိုကိုယ်စားပြု, နှင့်လူများသူတို့နေသောထုတ်လွှင့်ဖို့ခွင့်ပြု. သူတို့လူကြိုက်များသော်လည်း, လူအများစုကသူတို့ကိုရင်းစိတ်မကောင်းတက်အဆုံးသတ်မည်.
အများဆုံးကိစ္စများတွင်, နောင်တရသောသူတို့ကိုလည်း တက်တူး သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်သူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးတက်တူးထိုးရှေးခယျြဖို့အချိန်ကိုမယူခဲ့ပါ.
ဖြစ်ပျက်မှဤကာကွယ်တားဆီးဖို့, သင်တို့၌အစဉ်သင့်ရဲ့အိပ်မက်ဒီဇိုင်း n အချို့သောအချိန် ယူ. စုံလင်သောတက်တူးကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်.
အစား, သင်ဧရိယာနီးစပ်ရှာတှေ့နိုငျသောအကောင်းဆုံးစတူဒီယိုနှင့်အဆိုရှင်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်. ဒါကြောင့်စျေးကြီး N ဖြစ်မည်အကြောင်းသော်လည်းအရည်အသွေးနဲ့ဒီဇိုင်းကကောင်းစွာရကျိုးနပ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
အင်္ဂလိပ်: Freehand ချယ်ရီပန်းတွေနှင့် Koi ငါး. ဂျို Pang အားဖြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်တက်တူး (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
အချို့သောအဘို့, သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ဒီဇိုင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. ဒါကကိုခစျြတစျခုသို့မဟုတျအပေါ်လွန်ပြီသူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်.
သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့်အားတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်နှင့်သူတို့ကိုသင်သတိပေးသို့မဟုတ်သင်အမြဲသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုအသုံးပွုနိုငျတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံသို့မဟုတ်သင်္ကေတကိုသုံးနိုင်သည်. ကောင်းသောတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်တွေဓိပ်ပာယျနှငျ့မှော်တက်တူးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏မျက်နှာသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုထွက်တတ်၏တဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ.
တခါတလေ, က hard သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ကောက်နေရနိုင်. သငျသညျစိတျထဲမှာတစ်စိတ်ကူးရှိသည်သို့သော်သင်သည်လိုချင်တာတွေသေချာမရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအစဉ်အမြဲသုတေသနလုပ်ငန်းနိုင်.
သငျသညျတက်တူးထိုးစာအုပ်များရနိုင်, ဆောင်ပုဒ်စာအုပ်များ, မဂ္ဂဇင်း, သို့မဟုတ်ပဲအွန်လိုင်းသုတေသန. ဒီဇိုင်းများမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်စိတ်ဝင်စားသောအရာကိုမှအလားတူအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့စေခြင်းငှါ.
သင်ကတွေ့ပြီပြီးတာနဲ့, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့တက်တူးအနုပညာရှင်နှင့်အတူဆင်းထိုင်နှင့်သင်၏အိပ်မက်တက်တူးဒီဇိုင်းကိုအတူတက် လာ. ဖြစ်ပါသည်.
တက်တူးထိုး ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာသူတို့သည်အစဉ်မပြတ်နောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်. သင်ပထမဦးဆုံးသေးငယ်တဲ့တက်တူးထိုးကြိုးစားရန်လိုလျှင်ဤအရာသည်အလွန်အရာရှိနိုင်ပါသည်, ပြီးတော့သင်ကပိုကြီးရချင်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်.
သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ဒီဇိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူစတင် အကယ်., သငျသညျအစဉ်အမြဲအကြာတွင်ပေါ်မှာတက်အပြီးသတ်နိုင်.
သင်လိုအပ်သောအချိန်တင်နှင့်ယခုကသို့ထင်ခဲ့လျှင်, သငျသညျနောက်မှနောင်တwonít. သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုဒီဇိုင်းကအလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်သင့်, နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုင်.
ဒီလမ်း, သငျသညျကမှာကြည့်ရှုအခါတိုင်း N youíllအချိန်အတွက်အထူးယခုအချိန်တွင်၏သတိပေးခံရနဲ့youíllကအကြောင်းဘယ်တော့မှမေ့.
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းစတိုင် Tattoo ဒီဇိုင်း
ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့်လ၏အားကစားပြိုင်ပွဲ
သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ်လုပ်ဖို့ခုနစျပါးကြီးသောအမှုတို့ကို
Nintendo ပြောင်းလဲမည်: အဘယျသို့ကျနော်တို့ t ကို မှစ. မျှော်လင့်ပါတယ် ...
18393	0 အတတ်ပညာ, Bodyart, Cheryl Cole ကို, Nikko Hurtado, စတူဒီယို, ထိုးကွင်းထိုး, တက်တူးထိုးအနုပညာရှင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်
← တစ်ဦးကတောင်တန်းစက်ဘီးစီးလမ်းညွှန်ဝယ်ယူ တိုးတက်မှုအတွက်နောက်ထပ်စစ်ပွဲ →